​मदनले हुटिङ खाएको त्यो क्षण « Jana Aastha News Online
​मदनले हुटिङ खाएको त्यो क्षण
प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७४, आईतवार १८:०१
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र संविधान जारी भयो । ०४८ वैशाख २९ को दिन बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत पहिलो पटक (०५१ सालको निर्वाचनलाई छाडेर) प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने भयो । काठमाडौंमा ५ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको थियो । लामो समय भूमिगत रूपमा क्रियाशील नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पहिलोपटक यो संसदीय चुनावमा भाग लिँदै थियो । निर्वाचनलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न उक्त पार्टीले क्षेत्र नं. १ र ५ मा महासचिव मदन भण्डारी, क्षेत्र नं. ३ मा पद्मरत्न तुलाधर र ४ मा सहाना प्रधानलाई उठाउने निर्णय ग¥यो । क्षेत्र नं. २ को हकमा चाहिँ पार्टीले तुरुन्तै निर्णय लिन सकेन ।
काठमाडौंका एमाले कार्यकर्ता हामी त्यसबेला रघुजीलाई टिकट दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा थियौं । हाम्रो पहिलो भनाइ थियो– रघु पन्त विमर्श साप्ताहिकलगायत अन्य पत्रपत्रिकामा एमालेकै आलोचना गरेर लेख्छन्, नेता माधव नेपालको ब्रिफकेस बोक्दै हिँड्ने गरेकै आधारमा काठमाडौंबाट उम्मेदवारी दिन लगाउनु उचित हुँदैन । उनी गैरनेवार मात्र होइन, जनजातिविरोधी पनि हुन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ थियो । यसअघि कार्यकर्ताको चर्को विरोधका बाबजुद माधव नेपालको पहलमा रघु उम्मेदवार बन्दै छन् भन्ने सुनिसकेका थियौं । महासचिवको फोन आएलगत्तै अन्य साथीलाई खबर ग¥यौं र ८–१० जना हुर्रिएर बागबजार पुग्यौं । सबै नेता उपस्थित भइसकेका थिएनन् । हामीलाई एकछिन तल पर्खन भनियो । सानु श्रेष्ठ, उदयराज पाण्डे, केशव स्थापित, जीवनराम श्रेष्ठलगायत हामी बाहिर बसिराख्यौं । त्यतिञ्जेलमा केशव स्थापित ठूलो स्वरमा कराउन थाले । भन्दै थिए– काठमाडौंको चुनाव हाँक्ने हामी, हाम्रै कुरा सुनिन्न भने नेताहरू एक जनालाई टुकुचा खोलामा फालिदिन्छु । मैले केशवलाई ठूलो स्वरमा नकराउन आग्रह गरें । एक तलामाथि बसिरहेका नेताहरूले सुन्लान् भन्ने डर थियो तर केशवले ‘सुने सुनुन् । सुनुन् भनेरै भनेको हो’ भन्दै झन् बम्किन थाले ।
त्यसपछि बल्ल मनमोहन ठण्डा भए । हामी सबैले रघुको उम्मेदवारीको विरोध ग¥यौं । हामीलाई विरोध गर्न लगाउन बोलाउने मदनचाहिँ चुपचाप बसिरहनुभयो, केही थाहा नपाए जसरी । सीपीले फेरि सोधे ‘ल ठीक छ, रघु हुँदैन भने अरु को त ?’ हामीले अष्टलक्ष्मी शाक्य र सानु श्रेष्ठमध्ये जो कसैलाई उठाए पनि फरक नपर्ने सुझाव दियौं । मनमोहनले ‘ठीक छ तपाईंहरू जानुस्, हामी छलफल गर्छौं’ भने । हामी फक्र्यौं । पार्टीले क्षेत्र नं. २ बाट अष्टलक्ष्मीलाई उठाउने निर्णय ग¥यो । पछि अष्टले पनि उठ्न पाइनन् । जनमोर्चासँग तोलमेलको कुरा मिलेपछि सो क्षेत्र उनीहरूको भागमा प¥यो । अष्टलष्मीको स्थानमा मल्ल के. सुन्दर उम्मेदवार बने । निर्वाचनमा उनी कांग्रेसका दमननाथ ढुंगानाबाट पराजित बने । दमननाथ पछि प्रतिनिधिसभाको सभामुख बने । जे होस् रघु पन्तलाई ‘टिकट’ दिने कुरा महासचिव मदन भण्डारीलाई पनि चित्त बुझेको रहेनछ भन्ने छर्लंग भयो । रघुको विरोध गराउन उहाँले पर्दा पछाडि बसेर खेलेको भूमिका शायद आजसम्म कुनै नेतालाई थाहा छैन होला ।
एमालेकै पूर्वनेता खपांगीको विरोधबाट मदन त्यसै पनि तिल्मिलाइसक्नुभएको थियो । त्यसमाथि कार्यक्रममा जनजातिको ठूलो उपस्थिति थियो । मदनले एमालेको भाषिक नीतिलगायत समसामयिक राजनीतिबारे व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो । उपस्थित अधिकांश उहाँको भाषणबाट प्रभावित बनेनन् । दर्शकदीर्घाबाट ‘अनिवार्य संस्कृतका लागि थालिएको हस्ताक्षर अभियानमा तपार्इंले किन हस्ताक्षर गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्न आयो । हो–हल्ला शुरु भइसकेको थियो । मदनले शुरुमा आफूले हस्ताक्षर गरेको अनिवार्य संस्कृतिको लागि हो भनेर थाहा नपाएको स्पष्टीकरण दिनुभयो । मदन भण्डारी जत्तिको सचेत र बुद्धिमान व्यक्तित्वले दिएको जवाफले झन् आगोमा घ्यू थप्ने काम ग¥यो । सहभागी आ–आफ्नो सिटबाट उठेर हो हल्ला र हुटिङ गर्न थाले । मदनले फेरि पनि प्रस्ट कुरा राख्नुभएन । गोलमटोल जवाफ दिन थाल्नुभयो । ‘काइते तर्क’ दिएको भन्दै ‘आउट’ ‘आउट’ ले हल गुञ्जियो । सधैंभरि तालिमात्र खाने गरेका मदनले जीवनमै पहिलो र अन्तिम हुटिङ खानुभयो र त्यो दिन रन्थनिँदै हलबाट बाहिरिनुभयो ।
अनिवार्य संस्कृतविरोधी आन्दोलन चर्कंदै थियो । शायद सभागृहको कार्यक्रम शनिबार भएको थियो । बिहीबार असन चोकमा नेपाल भाषा मंकाः खलः ले अर्को सभाको आयोजना ग¥यो । स्थानीय नेवार समुदायले उक्त सभामा पनि मदनले काइते भाषा बोलेमा जुत्ताको मालासमेत लगाइदिने योजना बनाएको थाहा पाएँ । सोमबार बिहान मदनलाई सजग गराउने उद्देश्यले फोन गरें । हुटिङको कारण नक्सालस्थित डेराबाट बाहिरै ननिस्किइकन बस्नुभएको रहेछ । सोमबार बिहानसम्म पनि स्वरमा कम्पन थियो । शुरुमा रिसाउनुभयो । आफ्ना कार्यकर्तामाझ भनेर कार्यालयमा लगी बेइज्जत गराएको रिस पोख्नुभयो । मैले त्यहाँ उपस्थित अघिकांश एमालेकै मतदाता भएको तर चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नपाउँदा रिसाएर हुटिङमा उत्रेको यथार्थ कुरा सम्झाएपछि शान्त बन्नुभयो । तर बिहीबारको सभामा कुनै हालतमा उपस्थित नहुने जानकारी दिँदै पार्टीको तर्फबाट मोदनाथ पश्रितलाई लान भन्नुभयो । प्रश्रित झन पहिल्यैदेखि जनजातिमाझ आक्रोशित थिए, त्यसैले सभामा उनलाई बोल्न लगाउँदा पार्टीलाई झन बढी हानी हुनसक्ने कुरा राखें ।
मदनले आफूले पनि सम्झाउने भन्दै बाँकी कुरा सम्झाउने जिम्मा मलाई नै दिनुभयो । प्रश्रितसित फोनमा कुरा गरेपछि सजिलै समस्या सल्टियो । उनले सभामा उपस्थित जनसमुदायको भावनाअनुकूल बोल्ने आश्वासन दिए । नभन्दै असन चोकमा आयोजित सभामा उनले जनसमुदायलाई चित्त बुझ्ने गरी मात्र होइन, तालीमा ताली बजाउने गरी भाषण ठोके । स्थानीय जनताको रोष बल्ल शान्त भयो । लगत्तै सम्पन्न ०४९ को स्थानीय चुनावमा उपत्यकाबाट एमालेले राम्रो नतिजा हासिल ग¥यो । मदन भण्डारीलाई अत्यन्त आदर र माया गर्ने हामीलाई मदनले खाएको त्यो हुटिङले आज पनि मन दुखाउँछ, अशान्त बनाउँछ । किनभने यसअघि मदन नेवार समुदायमाझ पनि लोकप्रिय बनिसक्नुभएको थियो । प्रगतिशील संस्था ‘गथु पुचः’ द्वारा धरहरा, गणबहालस्थित गोयथे इन्स्टिच्युटमा आयोजित ‘न्हगु संविधानय् भाषा व जाति (नयाँ संविधानमा भाषा र जाति)’ विषयक विचार गोष्ठीमा मदनले सबैको मन जित्नुभएको थियो ।